I-Smartmi Air Purifier, isicoci esinobuchule kakhulu esineefilitha ze-H13 | Iindaba zeGajethi
I-Smartmi Air Purifier, isicoci esinobuchule kakhulu esinezihluzi ze-H13
UMiguel Hernandez | 20/11/2021 10:00 | elektroniki, ngokubanzi, Reviews
Ukucocwa komoya kuye kwaba yinkxalabo yanamhlanje kodwa ayibalulekanga kangako, kanye apha sihlalutye uninzi lwabacoci ezisinceda ukuba sigcine ikhaya lethu licocekile kangangoko kwaye lingenazo izinto eziphazamisayo, into efanele ukuxatyiswa kula maxesha. I-sub-brand ye-Xiaomi ebikunye nathi ixesha elide ayinakuphoswa kwikhathalogu yethu yohlalutyo.
Sihlalutya iSmartmi Air Purifier entsha, isicoci somoya esigqibeleleyo kuyilo kunye nokusebenza ngezihluzi ze-H13 ezithembisa ukusebenza okuhle. Siza kujonga le mveliso ephakathi kwixabiso malunga noluhlu lwezi ntlobo zezixhobo ukuze sibone ukuba ngaba kufanelekile okanye akunjalo.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Ukukhanya kodwa ukulungiswa okuphawulekayo
3 Umthamo wokucoca
Uyilo kunye nezixhobo: Ukukhanya kodwa ukulungiswa okuphawulekayo
Njengoko uyazi, imveliso yangaphambili ye-Smartmi yolu bungakanani kunye noluhlu lwalusisikweri ngokupheleleyo, kunye neekona ezijikelezileyo, ewe, kodwa kude noyilo olunikezwa yile Smartmi Air Purifier. Nangona kunjalo, i-palette yombala wendabuko igcinwa, umzekelo. Ngaphandle kwayo yonke le nto, iplastiki ye-matt emhlophe igcinwe njengeyona nto iphambili yokwakha, ihamba kunye noyilo olupheleleyo lwe-cylindrical olwenza ukuba lubonakale luhlangene kwaye, ngaphezu kwakho konke, lusebenza ngcono kuzo zonke iinkalo.
Ubungakanani: Ubukhulu: 266 x 265 x 535 mm
Ubunzima: 5,2 Kg
Ingaba uyithandile? Ungayithenga ngexabiso elifanelekileyo kwiAmazon
Ngokungathintelekiyo isikhumbuza i-i3000, isicoci sePhilips esifana nqwa, kokubini ngoyilo kunye nenyaniso yokuba iphaneli ye-LED ibekwe kwindawo ephezulu kwaye yeyona isivumela ukuba sihlengahlengise ngokupheleleyo iiparitha zesicoci somoya. Incwadi yesandla. Ukuthelekisa kunenzondo, ewe, kodwa xa sihlalutya iimveliso zoluhlu oluthile asinakukhetha ngaphandle kokukhankanya ezo zihlobene kakhulu nazo. Ngokubanzi, njengazo zonke iimveliso zolu hlobo luncinci lwe-Xiaomi, sijongene nesixhobo esigqitywe kakuhle esimnandi emehlweni nasekuchukumiseni.
Lo mcoci woMoya we-Smartmi unento yokuba ibingekhe ibe njalo ngoqhagamshelo lweWiFi kunye noku Isivumela ukuba silawule isicoci ngesicelo se-Xiaomi Mi Home ekhoyo kwi-iOS kunye ne-Android, Kunye nokuyingqamanisa kunye nabancedisi abaphambili, ngokucacileyo sithetha ngeAmazon Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, akunjalo ngeSiri okanye ezo zithathwe kwi-Apple HomeKit, nangona ezinye iimveliso ze-Xiaomi zinako oko kudityaniswa. Ukongeza koku kunye nolawulo lwencwadana ngokwayo, sinemodi ethi «AUTO» eyenza ukulungelelaniswa okuhlakaniphile kwesantya sokucoca ngokweendlela ezahlukeneyo zoluvo ezilungiselelwe ngasemva kwe-Smartmi Air Purifier, imowudi endiyincomayo. .
Kwakhona sinemigangatho emininzi yokungena komoya, ukuba imowudi yengxolo ephantsi inikezela malunga ne-19 dB, ngokwaneleyo ukuva umqhubi kodwa ungabangeli ukuphazamiseka emini. Ngobusuku sine "imowudi yasebusuku" enciphisa kakhulu le santya kwaye iphucula ukuphumla.
Ngendlela efanayo, ukusebenzisana nesixhobo esinokusisebenzisa okanye isikrini sayo sokuchukumisa, okanye inkqubo yegestural ngokusebenzisa izinzwa ezisondele oko kuya kusivumela ukuba senze uhlengahlengiso oluphambili ngaphandle kokuchukumisa ipaneli yokuchukumisa kwindawo ephezulu. Ukusebenzisana kwethu nenkqubo ye-gesture akuzange kube kuhle kakhulu, ndingatsho ukuba ndikhetha ukulungiswa ngesicelo okanye ngokuthe ngqo ngokuchukumisa isikrini.
Apha iSmartmi Air Purifier yenza okuseleyo. Ukuqala, sinesihluzo se-HEPA H13 esikwazi ukufunxa ivumba elibi, umsi, iincinci zeTVOC (eziqhelekileyo zeemveliso zokucoca) kunye ne-pollen ngokuqinisekileyo. Kwiphaneli siya kuba nakho ukufumana ulwazi malunga zombini i-PM2.5 esinayo emoyeni kunye nesalathisi sesimo se-TVOC, ngaphezu kwesinye isalathisi sendlela yokusebenza, iqondo lokushisa kwaye ngokuqinisekileyo isalathisi somswakama kwindawo yokucoca umoya.
Kule migaqo kunye nokuthatha ithuba le-sensor ephindwe kabini "yobukrelekrele", sifumanisa ukuba kusetyenziswa malunga neshumi elinambini lokucocwa komoya ngeyure, esi sixhobo ngokwethiyori siyakwazi ukucoca malunga ne-15 yeemitha zesikwere kwimizuzu emihlanu, ke esi sinye siya kucetyiswa ngokuphindwe kabini. amagumbi okanye amagumbi okuhlala amancinci, akukho meko kumagumbi amakhulu agcweleyo okanye iipaseji. Nangona kunjalo, isihluzi sekhabhoni esisebenza kakuhle kakhulu sisebenzisa iindlela ezintathu:
Isihluzo sokuqala sothuli, iinwele kunye namasuntswana amakhulu
I-HEPA yokwenene isihluzo se-H13 esihluza ama-99,97% amasuntswana asusa iintsholongwane kunye neentsholongwane.
Ikhabhoni esebenzayo ukufunxa i-formaldehyde, umsi kunye nevumba elibi kunye neeVOCs.
Ngobuchule singathetha nge-400 m3 ngeyure kwi-pollen kunye okufanayo kwi-CADR yamasuntswana, ngelixa sinomgangatho wephepha lokucoca olwandisiweyo lwe-20.000 cm3. Ngele ndlela, iya kuhluza i-99,97% yamasuntswana amancinci kune-0,3 nanometers, kunye nezinye izinto esithethe ngazo ngaphambili.
Ngaphandle kwemeko esemthethweni yemveliso, andikwazanga ukufumana isihluzi ngokwahlukileyo, ukuqina kwayo kungachazwanga kwaye kuya kulawulwa sisicelo seMi Home okanye isixhobo sesilumkiso sesikrini, ihlazo. Ndicinga ukuba abasasazi abaninzi bezihluzo bayakufika, okwangoku andinakukhankanya okanye xabiso okanye indawo yokuthengisa apho unokuzithenga khona, ngokwembono yam into eqinisekileyo xa uthenga imveliso enezi mpawu, kungakhathaliseki ukuba ixesha elide lokucoca linokuqina okuphezulu.
Sijongene nomcoci onikezela ngeempawu ezintle kakhulu ngokobuchwephesha nasephepheni, ngcono ukuba kunokwenzeka kunabakhuphi bakhe ngexabiso elifanayo kwaye bangaphezulu kakhulu. Sine-euro ezingama-259 isicoci esipheleleyo esinazo zonke iimpawu umntu anokuzilindela kwimveliso enjalo. Ngelishwa, andinakukwazi ukuyeka inqaku elibi lokuba andinakufumana iindawo ezisecaleni kwiindawo ezithengiswayo ezifana ne-PC Components okanye i-Amazon, ezibhekiselele eSpain, ngaphaya kwento yokuba zinokufumaneka kwiindawo ezifana ne-AliExpress.
I-Smartmi Air Purifier
Ithunyelwe nge: NgoNovemba 20 ukusuka kwi2021
Uqhagamshelwano kunye neempawu
Andikhange ndifumane iindawo ezisecaleni ngokulula
Akukho kufumaneka kwiiwebhusayithi eziphambili okwangoku
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Smartmi Air Purifier, isicoci esinobuchule kakhulu esinezihluzi ze-H13
ILenovo IdeaPad Flex 5 kwiLaptop eTshintshwayo enesaphulelo se-€ 100,99